Google GMail advertising in Myanmar - AdvertisingMyanmar.com
Google GMail advertising in Myanmar
Advertise with usကြော်ငြာထည့်ရန်
You are here: ★ http://advertisingmyanmar.com ► F.A.Q. ► Google GMail advertising in Myanmar
Google (ဂူဂဲ)ပေါ်မှာ ကြော်ငြာချင်ရင်...
Google + GMail advertising in Myanmar
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကြော်ငြာမယ်ဆိုရုင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်ဖြစ်တဲ့ ဂူဂဲလ် (Google.com) နဲ့ ဖေ့ဘုတ် (Facebook.com) ပေါ်မှာ ကြော်ငြာတာကတော့ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူအတော်များများ မေးတတ်ကြတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဒီလို ရှင်းလင်း တင်းပြလို ပါတယ်။ သိလိုတဲ့အကြောင်းကို မေးခွန်းပေါ်မှာ ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ။ ဂူဂဲ အက်ဝဒ် ဆိုတာဟာ ဝဗ်ဆိုက်တွေ ပေါ်မှာ ကြော်ငြာတွေ ပေါ်အောင် လုပ်ပေးပြီး၊ အဲဒီ ကြော်ငြာကို လူတွေက ကလစ်လို့ ရှိရင်၊ နှိပ်လို့ ရှိရင် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဝဗ်ဆိုက်ကို ရောက်လာအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ကမ္ဘာ့အထိရောက်ဆုံး ကြော်ငြာနည်းစနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Google Analytics ကို ဘယ်လို ကြည့်ရမလဲ?
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Google Analytics ကို ကြည့်လို့ရအောင် သင့် web site တာဝန်ယူ တည်ဆောက်တဲ့သူက လူကြီးမင်းရဲ့ email နဲ့ ဝင်ကြည့်ခွင့် ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးပြီဆိုမှ လူကြီးမင်းရဲ့ Google email (Gmail သို့မဟုတ် Google for Work email) နဲ့ log in ဝင်ပါ။ ပြီးမှ အောက်က အင်တာနက် လိပ်စာကို ဖွင့်ကြည့်ပါ။
နောက်ကမ္ဘာတစ်ခုလောက် များတဲ့ marketing intelligence ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ statistics တွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဟာက ဘာအဓိပ္ပါယ် ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
ဘာတွေ မကြော်ငြာရဘူး ဆိုတာကော ရှိလား
ရှိပါတယ်။ ဆေးပစ္စည်း၊ လက်နက်၊ အတုအယောင် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး စသည့် မရောင်းရသည့် ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းများ ရှိပါသည်။ အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုကြည့်ပါ။
အဆင့်-၅။ ထိရောက်မှု ရှိမရှိ သုံးသပ် ပြင်ဆင်ပါ။
လူကြီးမင်းရဲ့ ကြော်ငြာ စာသား၊ ဒီဇိုင်၊ သို့မဟုတ် အရောင်ဟာ ထိရောက်မှု မရှိဘူး ထင်ရင် အမျိုးမျိုး ပြောင်း ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ စမ်းသပ်လို့ ရပါတယ်။ ငွေအများကြီး သုံးနိုင်မှ TV မှာ ကြော်ငြာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အရင်းရှင် လက်ဝါးကြီး အုပ်လို့ရတဲ့ ခေတ် မဟုတ်တော့ ပါဘူး။ သင့် သုံးချင်သလောက် ကြော်ငြာ အသုံး စရိတ်လေးနဲ့လည်း မိမိ ချိန်ရွယ် ချင်တဲ့ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက် ကြော်ငြာ နိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့က Google ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေ သုံးပြီး ကြော်ငြာ ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဆင့်-၄။ ကြော်ငြာ စရိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
သင်ဘယ်လောက်ဘဲ ကြော်ငြာ စရိတ်ကို သုံးချင်တယ် ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ရ ခက်သေးရင်လဲ automatic mode ကို ရွေးထားပြီး ကြော်ငြာလည်း ရပါတယ်။
အဆင့်-၃။ သိစေချင်တာကို ပြောပြပါ။
သင့် ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ဈေချင်တဲ့ သူတွေ သိသွားအောင်၊ နားလည် ယုံကြည်သွားအောင် သင့်ရောင်းကုန် ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်းကို ပြောပြပါ။
စိတ်ဝင်စားအောင် ပြောနိုင်လေလေ၊ သင့်ကြော်ငြာ ထိရောက်မှု ရှိလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်-၂။ ဘယ်သူ့ကို ကြော်ငြာ သွားပြမယ် ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဘို့ လိုပါမယ်။
ဘယ်သူ့ကို ကြော်ငြာ သွားပြမယ် ဆိုတာ၊ ဘယ်သူက ဈေးဝယ်မယ့်လူ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ရွေးချယ် သတ်မှတ်မှ ရမယ်။ ကိုယ့်ပစ္စည်း မဝယ်မယ့် သူတွေကို သွားကြော်ငြာ နေမိရင် အလကား ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိရောက်မှု မရှိတဲ့ ကြော်ငြာတွေကြောင့် သင့် ကြော်ငြာ ကုန်ကျငွေတွေ ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးတတ်တယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
အဆင့်-၁။ ကြိုစဉ်းစား ကြည့်ရအောင်
ဘာဖြစ်ချင်လဲ? ဘာလိုချင်လဲ? ကြိုစဉ်းစား ကြည့်ကြည့် ရအောင်။ အစီစဉ် ဆွဲတာပေါ့။
Google Adwords (ဂူဂဲ အက်ဝဒ်) ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဂူဂဲ အက်ဝဒ် ဆိုတာဟာ ဝဗ်ဆိုက်တွေ ပေါ်မှာ ကြော်ငြာတွေ ပေါ်အောင် လုပ်ပေးပြီး၊ အဲဒီ ကြော်ငြာကို လူတွေက ကလစ်လို့ ရှိရင်၊ နှိပ်လို့ ရှိရင် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဝဗ်ဆိုက်ကို ရောက်လာအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ကမ္ဘာ့အထိရောက်ဆုံး ကြော်ငြာနည်းစနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ။ ကြော်ငြာ ထိုးချင်ပါပြီဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ?
မြန်မာနက်နဲ့ ဆက်သွယ် လိုက်ပါ။
မြန်မာနက်၊ ကြော်ငြာဌာန ဖုန်းနံပါတ် ကတော့ 09 431 888 95 ဖြစ်ပါတယ်။
ဂူဂဲပေါ်မှာ ကြော်ငြာရင် ဘယ်လောက်ကျ မလဲ?
အနည်းဆုံး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ (ကျပ် ၁ သိန်းခန့်) ကနေ စလို့ ရပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ပစ်မှတ် ထားချင်တဲ့ ဈေးကွက်ရယ်၊ ပရိတ်သတ်ရယ်၊ keyword စာလုံးတွေပေါ် မူတည်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ကွာနိုင်ပါတယ်။
ပြိုင်ဆိုင်မှု များတဲ့ ဈေးကွက်မှာ ဈေးပိုကြီးတတ် ပါတယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ diversion strategy သုံးပြီး အများနဲ့ မတူတဲ့ keyword စာလုံးကို ရွေးပြီး ဈေးသက်သာအောင် ကျွန်တော်တို့က ကူညီ ပေးပါမယ်။
Are you ready to order Google AdWords advertisement service?
ဂူဂဲပေါ်မှာ ကြော်ငြာ ပါလား?
Google advertising is one of the most cost-effective productive methods available to humans today. Use this most advanced technologies to promote your business. Our Myanmar-speaking ad experts are here to assist you all the way for your marketing needs.
Ad Categories ကြော်ငြာအမျိုးအစား
Advertising in Myanmar with free Classified Ads (အခမဲ့ ကြော်ငြာ ကဏ္ဍ)
ကား / To sell CARS
အိမ် / To sell HOUSES
Advertising Myanmar .com
Advertising Division of Myanmars.NET
Yangon: (+95) 09 4318 8895, (+95-1) 652323, 652250
Californai: (+1) 707-988-0300